Isitudiyo sibekwe kwiPines ecaleni kwechibi. PETS kulungile! - I-Airbnb
Isitudiyo sibekwe kwiPines ecaleni kwechibi. PETS kulungile!
Indlu yethu yamaplanga encinci ibalungele abantu abathandanayo okanye abathandanayo abanomntwana omncinci. Ikufutshane ne-15 feet ukusuka e-lakeshore. Yonwabela ikofu yakho yasekuseni ejonge ichibi elipholileyo, umamele ukubizwa kwee-loons.
Yonwabela umlilo otofotofo kwindawo yomlilo yabucala ekwiimitha eziyi- ukusuka echibini. Ngena kwichibi kwenye yezikhephe zethu zokutyibiliza emanzini, iibhodi zokutyibiliza emanzini, ii-kayak okanye izikhephe, ezisimahla kwiindwendwe. Buka ichibi uze ubone izilwanyana zasendle ezininzi, kuquka ii-eagles nee-loons.
Le ndlu yamaplanga inokuhlala abantu abadala abayi-2 kunye nomntwana omncinci. Ayizukuhlalisa abantu abadala abayi-3.
Izindlu zethu zamaplanga!
Zonke izindlu zethu zamaplanga zineveranda, itafile yepikiniki, igrili yamalahle (amalahle anikezelweyo), izitulo zengca kunye nomngxuma womlilo wabucala. Izindlu zamaplanga ziquka iTV/iDV ibe ziza nekhitshi eline-microwave, isitovu, ioveni, umatshini wokwenza ikofu nazo zonke izitya, iimbiza neepani nezinto zokupheka.
Sinamashiti neetawuli zebhedi, ukongezelela kwiphepha langasese, iitawuli zamaphepha, isepha yezitya nesepha yezandla. Le yindlu yamaplanga engatshayiyo.
Sine-pontoon kunye nezikhephe zokuloba zokuqesha ukuba awunayo eyakho kodwa ufuna ukuthenga intlanzi okanye uhambo oluhle lweWest Crooked Lake.
kwi-West Crooked Lake Resort yenza intsapho yonke iphole kwaye yonwabe. Unokonwabela ukuhlamba elangeni elunxwemeni lwesanti, ukuqubha emanzini acocekileyo, ukudlala kwi-Rave Water Park, okanye ufunde incwadi emthunzini. Mamela ii-loons ezibiza, ubukele ii-eagles zikhuphuka, zigqithe emanzini acocekileyo kwisikhephe okanye kwisikhephe esinephenyane, okanye uphathe incwadi, uphumle, uze ubambe imisebe elunxwemeni lwesanti.
Iindawo Ezinomtsalane Iindawo ezininzi ezinomtsalane
ziyimizuzu nje eyi- ukusuka kwi-resort. Ukuhamba ngebhayisekile/ngeenyawo, iindawo zokudlala igalufa, ii-casino, ibala leengxaki, indawo yokwenza iwayini yasekuhlaleni, ukukhwela ihashe, ukuthenga kunye neevenkile zokutyela zezinye zezinto ezinomtsalane oza kuzifumana. Ukongezelela, iiHeadwaters zaseMississippi e-Itasca State Park zikwimizuzu eyi-30 ukusuka kwi-resort. Abakhweli be-ATV bonwabela amakhulukhulu eemayile kwi-Park Rapids Lakes Area, nto leyo eyenza basondele kubuhle bendalo kwiindawo ezikude abanye abadla ngokungaboniyo. Iiklabhu zasekuhlaleni zigcina imizila emibini ephambili kwindawo yethu, edibene neemayile zeendlela eziphakamileyo/kwiindlela eziphakamileyo. Yiya ngqo kwi-ATV yakho kwiindlela ezisuka kwi-resort yethu.
Uza kuthenga intlanzi?
Amachibi aseNtshona naseMiddle Crooked liyinxalenye yamachibi adumileyo aseMantrap – lelona lizwe libalaseleyo lokuloba eMntla Minnesota. Intlanzi oza kuyibamba kwiWest Crooked Lake iquka uMntla, iWalleye, iBass nePanfish. Unokuthatha intlanzi ngqo edokisini kwi-resort okanye uye kwiindawo ezininzi ezikweli chibi elizolileyo. Xa usechibini, amaxesha amaninzi uza kuzifumana ukonwabela ubuhle obupholileyo beWest Crooked Lake kungekho ezinye izikhephe.
IWest Crooked Lake Resort, ecaleni kwe-1000 feet of lakeshore, yindawo elungele intsapho nezilwanyana zasekhaya. Sise-Paul Bunyan State Forest, singqongwe ziidiliya ezinde kwi-West Crooked Lake e-Nevis, e-MN. Izindlu zamaplanga zihleli kwindawo evulekileyo ejonge ichibi elifihlakeleyo, elicocekileyo nelihle. Ngoxa indawo yethu ithule kwaye ipholile, sineemayile eziyi-7 kuphela eNevis, MN, iimayile eziyi-15 zePark Rapids, MN kunye neemayile eziyi-15 ze-SW of Walker, MN. Zininzi izinto onokuzithenga, zokutyela nezolonwabo.
Unokonwabela ukuhlamba ilanga elunxwemeni lwesanti, ukuqubha emanzini acocekileyo, ukudlala kwi-trampoline yamanzi ye-Rave, okanye ufunde incwadi emthunzini. Phuma echibini kwizikhephe zethu zokutyibiliza emanzini, iibhodi zokutyibiliza emanzini, ii-kayak neenqanawa ezifumaneka simahla. Sinezikhephe zokuloba nee-pontoon ezinokuqeshwa, ngoko ungabuka kwakhona iWest Crooked Lake. Yiza wonwabele izilwanyana zasendle ezisechibini, kuquka ii-eagles kunye neeloon ezininzi. Mamela ukubizwa kwee-loons ngokuhlwa njengoko uvula imini yakho echibini.
Sinezindlu zamaplanga eziyi-5, iindawo zokuqeshisa eziyi-2 RV, indlu encinci (indlu yamaplanga) kunye neendawo zokukhempisha zexesha elithile lonyaka. Izindlu zethu zamaplanga zicoceke kakhulu kwaye zigcinwe kakuhle. Indlu yamaplanga nganye iyibona kakuhle iWest Crooked Lake kunye netafile yepikiniki, i-grill, izitulo zengca, umngxuma womlilo wabucala (iinkuni ezithengiswe kwisayithi). Amakhitshi anezitya, iiglasi, amacephe, izinto zokupheka, iimbiza/iipani, izitya. Ukongezelela, kukho i-microwave, isitovu, ifriji, umatshini wokwenza ikofu, kunye ne-toaster. Iibhedi zinamashiti, iingubo, into yokondlula ibhedi nemiqamelo. Sikwabonelela nelinen yasekhitshini kunye neetawuli zokuhlamba kwindawo yakho yokuhlala. Ukongezelela, sinezitulo eziphakamileyo okanye izinto zokuqinisa indlu yamaplanga nganye kunye neepakethi ezifumanekayo xa ziceliwe. Bona inkcazelo engakumbi ngezinto esinazo kwizindlu zethu zamaplanga.